‘मैले कसैको धर्मलाई घोचपेच गरेको छैन, मेरो नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुस्’ गायिका सोफिया थापा – Dainik Sangalo
‘मैले कसैको धर्मलाई घोचपेच गरेको छैन, मेरो नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुस्’ गायिका सोफिया थापा
July 27, 2020 333
रुपनि जि.एम । “प्रिय पाठक यसमध्ये कुन चाहीँ शब्द तपाँईलाई आपत्ति लाग्यो ? यो गीत मार्फत भौतिक कार्वाहीकै धम्की खानु पर्ने के अपराध गरेकी छु मैले ? यो गीतमा मैले लेखेका, गाएका कुनैपनि हरफ वा शब्द औल्याएर हाटहुट नगरी, बलप्रयोग र भौतिक कारवाहीको धम्की नदिई शान्त स्वरमा छलफल गरेर याहाँ यो गल्ती भयो, भनेर कसैले मैरो चित्त बुझाई दिनु हुन्छ भने म माफी माग्न पनि तयार छु ।” यो भनाई हो गायिका सोफिया थापाको ।
तीज नजिकिंदै गर्दा तीजका शब्दहरुलाई समावेश गरेर ‘अबको तीज नो ब्रत प्लिज’ भन्ने गीत गाएकै कारण यतिबेला निकै नै चर्चामा रहेकी छन् गायिका सोफिया थापा । सकारात्मक र नकारात्मक दुवैको बराबरी प्रतिकृया बटुल्दै उनी यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्चित बनिरहेकी छन् । उनको गीतको विरोधमा केही अधिकारकर्मी महिलाहरु, हिन्दु धर्मका केही अगुवाहरु त्यसैगरी केही निश्चित वग, क्षेत्र र समाजका मानिसहरु रहेका छन् भने । समर्थन गर्नेहरुमा थुप्रै दिग्गज व्यक्तिवहरुदेखि आज नेपाली जनताहरु रहेका छन् ।
गीतका शब्दहरुमा कुनै पनि धर्म, जात, वर्ग र समुदायलाई छोएको पाईंदैन । तर पनि यस्ले हिन्दु महिलाहरुको महानपर्व तीजलाई लान्छित ग¥यो भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै गायिका थापालाई अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नेहरुको जमात सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर उनीद्धारा गाईएकै उक्त गीतको समर्थनमा लाग्नेहरुले विरोध गर्नेहरुमाथि जाईलाग्दै गायिका थापाको बचाउ गरेको पनि देख्न सकिन्छ ।
थोरै धेरै जे जस्तो भएपनि आखिर विरोध विरोध नै हो । गाली गाली नै हो । अपमान सम्मान हुनै सक्दैन । गीत गाएकै आधारमा सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध भईरहंदा गायिका थापालाई यस्को कस्तो असर परेको छ ? यी दिनहरुमा उनले आफुलाई कसरी काउन्सिल गरिरहेकी छन् ? विरोध र समर्थन गर्नेहरुप्रति उनको भनाई के छ ? यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नहरुको जवाफ गायिका थापाले ताजाखबरसंगको कुराकानीमा दिएकी छन् । सोही कुराकानीको केही अंश ।
तापाँईले गाएको गीत सार्वजनिक भए लगत्तै यसको विरोध हुन शुरु भयो । अहिलेसम्मै विरोध गरिरहेका पनि छन्, विरोध नै गर्नु पर्ने कारण किन आईलाग्यो ?
यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने महिला भएर यस्तो कुरालाई उजागर गर्न सक्ने जुन मेरो आँट यो गीतको माध्यमबाट बाहिरीयो यस्ले विरोध गर्नेहरुको ईगोलाई हर्ट ग¥यो भन्ने मलाई लागेको छ । अरु त म कुनै कारण नै देख्दिन । विरोध गर्नै पर्ने कुनै कारण नै छैन तैपनि विरोध भईरहेको छ । यस्तो हुनुमा अर्को कारण मलाई के पनि लाग्छ भने गीतकै नाममा राजनीति गर्नेहरुलाई एउटा विषय मिलेको हो कि ? जस्ले गर्दा उहाँहरुलाई राजनीति गर्न सजिलो भएको हुन सक्छ । यस्तो मलाई लाग्यो । किनभने मैले त साधारण रुपमा मेरो गीतलाई प्रस्तुत गरेको हो । यस्मा केही पनि छैन । कुनैपनि धर्मलाई मैले केही पनि भनेकै छैन । र पनि धर्मको नाम जोडेर जसरी गीतको माध्यमबाट स्वयम मलाई गालीहरु गरिएको छ । हिन्दु धर्मको खिल्लि उडायो भनेर विरोध गरिएको छ यो एउटा फुसर्दिलो मान्छेहरुको रोगी मानसिकताले गरेको कुरा भन्छु म । किनभने यतिबेला कोरोनाले गर्दा पनि धेरै जना मानिसहरु फुर्सदमा हुनु हुन्छ । सायद उहाँहरुले आफ्नो फुर्सदिलो समयलाई मेरो गीतको भावार्थ नै नबुझेर विरोध गरेर बस्नु भएको हो भन्ने मलाई लागेको छ ।
तपाँईले त पहिलादेखि नै गीत गाउँदै आईरहनु भएको हो नी, यतिका लामो समय किन लाग्यो गीतको माध्यमबाट समानताका कुरा गर्न तपाँईलाई ?
हाम्रो परम्पराले हाम्रो सोंच कस्तो बनाई दिएको छ भने, तीज भन्ने बित्तिकै लोक भाकामा गाईएको गीतमा नै नाच्नु पर्छ । तीज गीत भनेको नै लोक भाकामा गाईएको गीत मात्र हो । त्यो बाहेक अरु जुन सुकै भाकामा तीजलाई लक्षित गरेर गीत गाईए पनि ती गीतहरुलाई तीज गीत भनिदैंन । मेरो विधा लोक परेन । मेरो विधा पप र आधुनिक तिरको पर्छ । मैले यो गीत तीज गीत भनेर गाएको पनि होईन । तर सबैले यस्लाई तीज गीत भनेर भनि रहनु भएको छ । मैले यस्लाई तीजमाथि लेखिएको गीत भनेको छु । तीज पर्वमा गरिने जुन रोईलोहरु छन् त्यसको विषयमा लेखेको हुँ । जस्तो कि अबको तीज नो ब्रत प्लिज, अब आउने तीजहरु यसरी पनि मनाउन सकिन्छ भनेको छु । यस्को अर्थ मैले अडर गरेको होईन । मैले महिला पुरुष सबैलाई अनुरोध मात्रै गरेको हो ।
ब्रत बस्नेले ब्रत बस्न पाउनु पर्छ भन्न हुने, मैले श्रीमानको खुट्टाको पानी खाएर ब्रत नबसौं, बस्ने नै हो भने दुबैले बराबरी रुपमा खुट्टाकै पानी खाएर बसौं भन्न पनि नपाउने ? मेरो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा भन्न त पाउन प¥यो नि । म जान्ने र बुझ्ने भएदेखि यस्तो प्रकारले तीज मनाएको देखेकै छैन । तर म त समाजमा बस्छु नि । त्यही समाजमा मैले म जान्ने र बुझ्ने भएदेखि देख्दै आएको छु कि तीजमा दिनभरी पानी पनि नपिएर ब्रत बस्ने अनि साँझ श्रीमानको खुट्टाको पानी पिएर ब्रत फुकाउने । तीजमा श्रीमानकै खुट्टाको पानी पिउनै पर्ने नियम यदि हो भने, यो मेरो छिमेकीलाई मात्र किन मेरो घरलाई पनि लागु हुनु पर्ने होईन र ? यही कुराले मलाई सोच्न बाध्य बनायो र मैले यही कुरालाई मान्ने नै हो भने सबैले समान रुपमा मानौं न भनेकी मात्र हुँ ।
समर्थकहरुले गीतमा विरोध गर्न आवश्यक छैन भनि रहँदा पनि विरोध भैरहेको छ, यस्ले तपाँईलाई कस्तो प्रभाव पारि रहेको छ ?, यस्लाई कसरी ह्यान्ड गरिरहुन भएको छ ?
शुरुमा त मलाई एक किसिमको डर लागेको थियो । किनभने मेरो जीवनकै यो पहिलो घटना हो । मैले गीत गाउन शुरु गरेदेखि आजसम्म यस्तो नकारात्मक कुराको सामना गर्नै परेको थिएन । यति सम्मको विरोध होला भन्ने मलाई अलिकति पनि हेक्का थिएन । जुन किसिमले यो भईरहेको छ । यो मलाई त अवश्य पनि तनावपुर्ण भयो नै । तर जब मैले मलाई गाली गर्नेहरुको गालीलाई पढ्ने हिम्मत गरें । ती कमेन्टहरुलाई हर्ने थालें । मैले त्यसमा मलाई तथानाम गाली गरेको पाएँ । ती कमेन्टहरुमा कसैले क्रिस्चियन, कसैले मुुसलमान, कसैले मगर भन्दै जातियताको नाममा, धर्मको नाममा गाली गरिएको पाएँ । त्यस्ता प्रकारका कमेन्टहरु पढेपछि मलाई लाग्यो यस्तो कमेन्ट गर्नेहरुको के पछि लागेर म किन आफुलाई दुखि बनाउँ ? जस्ले मेरो बारेमा केही बुझेकै छैन । जानेकै छैन ।
गीतको शब्दहरुमा कसैको आपत्ति भेटेन । म माथि, मेरो परिवार माथि, मेरो आखाँ माथि, मेरो नाक माथि, यावत कमेन्टहरु दिएको पाएँ । जब यस्तो प्रकारको अनावश्यक कमेन्टहरु पढें तब यी कमेन्टहरु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्यो । किनभने यो त्यस्तो अनावश्यक कमेन्ट गर्नेहरु एउटा संस्थाका स्वामित्वको पछि लागेको हो कि भन्ने मैले आभाष गरें । जो मेरो रियल श्रोता हो उाहाँहरुलाई त मेरो गीत मन परेकै छ । भनेपछि यो ज जस्ले जे जे गरि रहनु भएको छ त्यो सबै एउटा मासले गरेको हो र त्यो मासको काम नै गरि खानेहरुको पछि लाग्ने, कसरी हुन्छ अरुको विषयमा टेकेर आफ्नो दुनो सोझाउने, आफुले गर्न सक्ने केही छैन अरुले गरेको कुराहरुमा कमि कम्जोरी औल्याएर भिड मच्चाउने । यस्तो कुरा मैले जब छुट्टाउन सकें तब मलाई त्यस्ता कमेन्टको असर आफुमा पार्न विस्तारै कम गर्न थालें । शुरुको तलनामा अहिले सामान्य नै छु ।
यो गीत गाएकै नाउँमा तपाँईलाई निकै नै गाली गरि रहेका छन्, यस्तो अवस्थामा परिवार र आफन्तहरुको तपाँईको जीवनमा कस्तो भूमिका छ ? कसरी काउन्सेलिन गरिरहनु भएको छ ?
म मेरो परिवार देखेर मलाई कहिलेकाँही अचम्म लाग्छ । धर्मको नाममा विभिन्न कुरिती मान्ने समाजको बीचमा मेरो परिवार यस्तो कसरी हुन सक्यो भन्ने कुरामा म साँच्चै अचम्मित हुन्छु । म यस्तो परिवारमा हुर्किएकी मलाई थाहै छैन यो व्रत यसरी बस्नु पर्छ, यो तीजलाई यसरी मनाउनु पर्छ । तडकभडकका साथमा चाडबाड मनाउनै पर्छ भन्ने कुरा मलाई कहिल्यै पनि मेरो परिवारबाट सिकाईएन । मेरो हजुरबुवाको पालादेखि नै तीज मनाउँदा व्रत बस्ने, तडकभडकका साथमा तीज मनाउने कहिल्यै गरिएन । हामीले पनि तीज मनाईन्थ्यो । तर सामान्य दिनमा झैं खाने कुराहरु पकाएर खाएर अनि सकिन्थ्यो । त्यही कुरा मैले मेरो समाजमा फरक पाएँ । मैले पाएको फरक कुुरालाई कलाकारीताको माध्यमबाट यसरी पनि त तीज मनाउन सकिंदो रहेछ त भनेर बुझाउ खोजोको मात्र हो ।
यसै विषयलाई स्क्याण्डल बनाएर मलाई जुन किसिमले मानसिक तनाव दिन खोजिएको छ यस्मा मलाई मेरो परिवारले या भनौं आफन्तहरुले एकदमै शान्त रुपले यस्लाई हेरि रहनु भएको छ र लिई रहनु भएको छ । यस्मा उहाँहरुले त्यस्तो कुनै महसुस नै गर्न भएको छैन जुन गराउन खोजिएको छ । सबै जना शान्त भएर यो कुरालाई चलि रहन दिनु भएको छ । हाम्रो परिवार आध्यात्मिकमा विश्वास गर्ने परिवार भएको हुनाले यस्को विरोध गर्नु भएको छैन । विरोध गर्नेलाई गर्न देउ । विरोध गर्न उहाँहरुले पाउनु हुन्छ भनेर उल्टै मलाई भन्नु हुन्छ । किनकी मेरो परिवारलाई पनि थाहा छ नि त यस्मा मैले के कस्तो शब्दहरु प्रयोग गरेको छु भनेर । त्यसैले गीत सार्वजनिक गर्दा हाम्रो दिनचर्या जस्तो थियो अहिले हाम्रो दैनिकी त्यस्तै नै छ । हामी आध्यात्मिकमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले हामी भिडहरुको पछि लाग्दैनौं । यस विषयमा उहाँहरु मेरो साथमै हुनु हुन्छ । जस्ले गर्दा म जुन सोफिया थिएँ त्यही सोफिया नै छु । म यो भिडले बनाउन खोजेको सोफिया अहिलेसम्म बनेको छैन र बन्ने पनि छैन ।
गीत गाएकै कारण तपाँईको विरोध गर्नेहरुलाई तपाँई के भन्नु हुन्छ ?
म उहाँहरुलाई केही भन्न चाहाँदिन । किनभने दोष उहाँहरुको हैन । दोष त सिस्टमको हो । दोष हाम्रो परम्परागत सोंच प्रणालीको हो । त्यसमा के भरिदिईएको छ भने तीजमा व्रत बस्नै पर्छ, श्रीमानको खुट्टाको पानी खानै पर्छ । श्रीमानको खुट्टाको पानी खाईसकेपछि त्यो व्रत बल्ल पुर्ण रुपले तोडिएको मानिन्छ । सास्त्रमा जति पनि लेखिएको छ नि यो व्रत लिएन भने नरकमा परिन्छ । दुःख पाईन्छ । बाँझि भईन्छ भन्ने जुन लेखिएको छ नि त्यसले दिमागमा यसरी घर बनाएको छ नि मानौं कि तीजमा यी कुराहरु गरिएन भने जीवन नरक नै हुन्छ । यति मात्र हैन तीजमा व्रत बसिएर भने हामी त समाजका नागरिक नै हैनौं कि जस्तो हामी माथि व्यवहार गर्छन् भनेर पनि यो तीजमा यस्ता खालको परम्परालाई प्राथामिकता दिनु परेको छ । यो एउटा बाध्यकारी अवस्था हो र यो नबुझ्दासम्म यसको विरोध भई नै रहन्छ । बुझ्ने हामी जस्ताले यसैगरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउने हो । यस्मा मलाई अरु खासै केही भन्नु नै छैन ।
जस्ले श्रीमानको खुट्टाको पानी पिउनु पर्छ भन्ने चाहाना र धारणा राखि रहेका छन् उनीहरुलाई त तपाँईले चित्त दुखाएकै हो नि ?
यसो भनेर मैले कसरी श्रीमानको खुट्टाको पानी खान चाहानेहरुको चित्त दुखाएको भयो र ? मैले भनेको मान्ने पर्छ भन्नकोलागी म को हो र ? म त न्यायिक प्रणालीमा बसेर फैसला सुनाउने मान्छे पनि होईन । जब म त्यो लेवलको पावरफुल मान्छे होईन भने मैले भनेर हुने र नभनेर नहुने भन्ने त हैन नि । कस्तो कुरा नबुझेर प्रतिकृयाहरु दिई रहनु भएको छ के । यो कुरा बरु मलाई निकै नै आश्चर्य लागि रहेको छ । मैले त मलाई लागेको कुरा मात्र पो भनेको हो । मैले श्रीमानको खुट्टाको पानी खान चाहानेहरुलाई नखानुस् है खानु भयो भने कारवाहीमा पर्नु सक्नु हुन्छ । जरीवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । आदि ईत्यादि भनेर भनेको छैन । खान रुचाउनेहरुलाई मैले खाँदै नखानुस् भनेको त हैन नि ।
अनि कसरी मैले दिन भरि पानी पनि नपिएर व्रत बसेका श्रीमतीहरु जस्ले आफ्नो श्रीमानको खुट्टाको पानी पिउन रुचाउँछन् उनीहरुलाई नखानुस् भन्न सक्छु त । मैले त केवल श्रीमानको माया पाउनलाई, श्रीमानलाई हेर्नुस् मैले तपाँईकालागी यतिसम्म पनि गरेको छु है मलाई छोडेर अर्की ल्याउने हैन नि भनेर आफुतिर ध्यान केन्द्रित गर्नलाई श्रीमानको खुट्टाको पानी खाएर खुशी बनाउँदैमा त्यो श्रीमानको माया पाईन्छ नै भन्ने हैन भनेर चेतना मात्र जगाउन खोजेको हो । यदि मायाकैलागी त्यो सबै गर्ने नै हो भने श्रीमानले पनि गर्नु प¥यो भन्न खोजेको हो । बराबारी हुनु प¥यो नी माया त हैन र ? यस्मा मैले कसैको व्यक्तिगत चाहाना र ईच्छालाई कुल्चन खोजेकै छैन । मैले भन्न खोजेको कुराको भाव नबुझेरै विरोध गर्नेहरुले आफ्नो चित्त आफै दुखाई रहनु भएको छ ।
विरोध गर्नेहरुसंगै समर्थकहरुको जमात पनि उत्तिकै छन्, आफ्ना समर्थकहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
मैले थाहा पाए अनुसार ०४५÷०४६ सालतिर देखि नै महिला सशक्तिकरणमा लाग्दा खेरी यो तीजको विषयमा उतिबेला देखि नै बहसको विषय बनेर विभिन्न तरिकाले छलफल गरिंदै आईएको हो । त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म प्रत्येक वर्षहरुमा बहस हुँदै पनि आएको छ । एक महिना अगाडी दर खाने कार्यक्रमदेखि लिएर, वैशाष जेठमै तीजका गीतहरु निकाल्ने देखि, समानताका कुरा चलिरहँदा पुरुषहरुले पनि नाच्न पाउँनु पर्छ भन्ने जस्ता विषयहरु यी यस्ता थुप्रै विषयहरुमा एकप्रकारको बहस चलि नै आई रहेको छ । जति नै बहस चलेता पनि त्यसको निचोड फेरी उस्तै ‘म मेरो खुशीले खान्छु, मेरो खुशीले नाच्छु, मेरो खुशीले गाउँछु, म जे गर्छु मेरो खुशीले गर्छु ।’ भन्ने आवाजहरु आईरहंदा मैले तिनै आवाजहरुलाई नै एकिकृत गरेर यो गीत बनाएको हो ।
पछिल्लो समयमा साहित्य भन्दा पनि संगीत धेरै नै माथि देखियो । प्रभाव पनि साहित्यको तुलनामा संगीतको एकदमै धेरै परेको छ पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा । र मैले त्यही साहित्यलाई संगीतको माध्यमबाट प्रस्फुटन गरेको मात्र हो । लेखाईको भन्दा बोलाईको अर्थात आवाजको प्रभाव छिट्टै नै पर्ने भएको हुनाले मैले बोलेर यो कुरालाई उजागर गरेको हो । यसमा त मैले कुनै पनि धर्मलाई छोएकै छैन । बरु मैले समानतासंगसंगै स्वास्थ्यको कुरालाई पनि उजागर गरेको छु । यो कुरा बुझि दिनु पर्ने हो । व्रत नै बस्नु हुँदैन भनेको त होईन नि भोकभोकै बसेर श्रीमानको माया पाईँदैन पो भन्न खोजेको हो त । ज–जस्ले मेरो आशयलाई बुझुन भयो उहाँहरुले मलाई समर्थन गर्नु भएको छ । यो कुरामा म मेरो सबै समर्थकहरुलाई मुरी मुरी धन्यबाद दिन्छु । मलाई समर्थन गर्नु भनेको मैले जस्तै समानताको आवाज बुलन्द गर्न चाहाने सबैको समर्थन गर्नु हो । त्यसैले मलाई सहयोग गर्नु हुने सबैलाई म धन्यबाद दिन्छु ।
Prevसरिता गिरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
Nextबल्ल मुख खोले आफ्नै श्रीमतिको ज्यान लिएका रन्जनको छोराले,खोले यस्तो रहस्य,त्यो दिन के भएको थियो (भिडियो हेर्नुहोस)